यो साता यी राशिहरु हुँदैछन् मालामाल? भदौ ६ देखि १२ गतेसम्मको राशिफल हेर्नुहोस् – Dainik Samchar
August 24, 2021 289
मेषः साथीभाइसँग मनोरञ्जन गर्दा दैनिक कार्यहरू ओझेलमा पर्न सक्छन् । मन मिल्नेहरूले मुख्य समस्या पत्ता लगाउन र समाधान खोज्न सहयोग गर्नेछन् । खानपान तथा विलासितातर्फ संयम रहनु नै बेस होला । कतै बाहिर घुम्न जाने मित्रहरूको प्रस्ताव स्विकार्दा अविस्मरणीय क्षण बन्नेछ । साताको अन्त्यमा आर्थिक भार महसुस हुन गई सापटी लिनु पर्ने हुन सक्छ ।
वृषः लामो तथा छोटो दूरीको यात्रामा थप खर्चले पिरोल्नेछ । राजनीतिक परिवर्तनकारी भूमिकामा नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलाग्नेछ । पारिवारिक सुख–सुविधाका निम्ति विलासिताका सामग्री खरिद गर्न खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । धनमा रहेका चुनौतीहरू यथास्थितिमै रहनेछन् । स्वास्थ्यप्रति हेक्का राख्नुहोला ।
मिथुनः बोलीको प्रभावले बिग्रन लागेको लाई मल्हम लगाउन सहयोग गर्नेछ । प्रशंसा गर्नेहरूले भित्रभित्रै आलोचना गर्न सक्छन्, होसियारी हुनुमा नै आफ्नो कल्याण हुनेछ । हरियो रंगको प्रभावले सहजता महसुस गराउनेछ । यो साता इष्टमित्रको मांगलिक कार्यमा सहभागी भइनेछ ।
कर्कटः कला तथा साहित्यद्वारा अरूलाई प्रभाव पार्न सकिनेछ । ह ठ गर्ने बानीले पारिवारिक मनमुटाव देखा पर्न सक्छ । ढिलै भए पनि सही मार्ग पहिल्याइनेछ । खरानी रंगको सवारी साधन खरिद गर्न आकर्षित भइनेछ । पश्चिमतर्फको यात्रा फलदायी सावित हुनेछ ।
सिंहः बल पूर्वक गरेका कार्यमा विवाद आइलाग्ला । अभिभावकको रुचिको ख्याल गर्दा आर्थिक नोक्सानी आइलाग्नेछैन । सहपाठीको सुझावमुताविक विदेश अध्ययनको मौका जुर्न सक्छ । कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाइ नगर्नुहोला । यो साता पूर्वतर्फको यात्रा फलदायी सावित हुनेछ ।
कन्याः मेहनतले जीवनशैलीमा परिर्वतन ल्याउन सक्छ । सहयोगीहरूले समस्या समाधानको बाटो देखाइदिँदा गुमिसकेको स्थान पुनः प्राप्त हुन सक्छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । शंकास्पद व्यवहारले प्रेमिका चि ढि न सक्छिन् । नीलो रंगको पहिरनले उन्नतिको मार्ग पहिल्याउन सहज हुनेछ ।
तुलाः मनका भावना आदानप्रदान गर्ने मित्र भेटिन केही समय कुर्नुपर्नेछ । प्रसंगवश मन पराएको अभिलाषासमेत व्यक्त गर्न सक्छन् । पारिवारिक मतको अनुमोदनले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । रोकिएका कार्य सम्पन्न भई आर्थिक सं क टको समस्या स्वतः समाधान हुनेछ । नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने प्रस्ताव आइलाग्न सक्छ।
वृश्चिकः आफूभित्र उत्पन्न हुने चञ्चलताप्रति संयमित रहनुहोला । सुनौलो रंग तथा तरल पदार्थको कारोबार फाप्ने देखिन्छ । मन मिल्नेबीच ठाकठुक पर्न सक्छ, कम बोल्दा आफ्नो हितमा हुनेछ । साथीभाइको सुझावमुताविक व्यवसाय परिवर्तन गर्ने संयोग परेको छ ।
धनुः प्रेमी–प्रेमिकाहरूको भावना सकारात्मक ऊर्जामा परिणत हुनेछ । बेरोजगार हुनुहुन्छ भने रोजगारी प्राप्त हुने सम्भावना छ । सम्झनलायक कार्य सम्पन्न गर्दा ठूलाबडाको सहयोग तथा आशीर्वादको आवश्यकता पर्नेछ । यो साता इष्टमित्रहरूबाट टाढै रहँदा लाभ हुने देखिन्छ ।
मकरः जीवनचर्या परिवर्तन गर्दा सफलताको मार्ग सहज हुने देखिन्छ । मन मिल्ने साथीले दिएको सुझाव मनन गरी चल्न सके आफूलाई प्रशस्त फाइदा हुनेछ । घरायसी व्यवहारमा समय नदिँदा पारिवारिक गुनासो बढ्नेछ । रोजगारीका निम्ति वैदेशिक यात्रा नजिकिँदो छ।
कुम्भः सेतो पहिरनमा प्रस्तुत हुन सके अरूको नजर आफूमाथि पर्नेछ । पारिवारिक सल्लाहमा अन्योल देखा पर्दा तपाईंको ठोस प्रस्ताव नै निर्णायक हुनेछ । खानपान फेरबदल भई शारीरिक दुर्बलता देखा पर्न सक्छ, योग अभ्यास तथा तातोपानी बढी पिउनाले प्राय समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ ।
मीनः धार्मिक यात्राले नयाँ स्थानहरूको मनोरञ्जन दिलाउनेछ । स्वास्थ्यमा सामान्य गडबडी देखा पर्न सक्छ, विचार पुर्‍याउनुहोला । मंगलबार तथा बिहीबार महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछन् । साथीहरूले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राख्नेछन्, निर्णय गर्न ढिलो नगर्नुहोला । भोज–भतेर तथा खानपानमा सहभागी हुँदा समयको ख्याल गर्नुहोला ।
Prevअन्तत टिकटक स्टार स्मारिकाको भयो डिर्भोस , सम्वन्ध अन्त्य हुनुको कारण के होला ?
Nextवर्षौ विदेश बसेर कमाउँदापनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहापाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए